Izindaba - ULV Cold Fogger Cleaning and Maintenance |I-Longray Fogger
Ivolumu ephansi kakhulu (i-ULV) Ama-Cold Fogger adinga ukuhlanzwa nokunakekelwa okuthile ngemva kokusetshenziswa ngakunye ukuze kuqinisekiswe ukuthi ahlala esebenza kahle.Ngokuvamile, yonke i-ULV fogger ebandayo izofika nebhukwana lemiyalo lapho uzothola khona lonke ulwazi lokuhlanza nokulungisa lomkhiqizo wakho.
Kodwa uma i-fogger yakho ingenayo imanuwali yeziqondiso noma uma ufuna ulwazi olwengeziwe mayelana nendlela yokulondoloza i-ULV fogger yakho ebandayo, usufike endaweni efanele.Siqoqe lawa macebiso okugcina, okuhlanza, nawokulungisa ukuze sikusize ugcine i-fogger yakho isesimweni.
==>Udinga ukuhlanza i-fogger yakho ngemva kokusetshenziswa ngakunye ukuze uqinisekise ukuthi ngeke yonakale endaweni yokugcina.Lokhu futhi kuzoqinisekisa ukuthi ikulungele ngesikhathi esizayo lapho uyidinga.
==>Uma usuqedile ukwenza inkungu, vala ibhanobho lokulungisa ngaphambi kokuvala amandla.Ukwenza okuhlukile kungase kulimaze amanye ama-fogger abandayo e-ULV ngoba uketshezi lungaconsa emuva ngepayipi futhi lungalimaza injini ye-fogger.
==>Ngemva kokuvala i-knob yokulungisa, uzodinga ukukhulula i-fogger.Kufanele wenze ezinye izinsizakalo kuphela ku-fogger ngemva kokuqeda lezi zinyathelo ezimbili, ukuze uphephe kanye nalokho komshini.
==>Hlola i-fogger ukuze uthole noma yimuphi umonakalo.Hlola izingxenye ezibalulekile ze-fogger njengesitsha sokubulala izinambuzane, ipayipi lokufutha kanye nentambo yamandla.Uma uthola umonakalo noma yikuphi ku-fogger, yilungise ngokwebhukwana lemiyalelo.Kungenjalo, ungathatha i-fogger uye esiteshini sesevisi esiqinisekisiwe.
==>Susa isitsha sokubulala izinambuzane futhi usihlanze.Ungalinge ushiye isibulala-zinambuzane noma olunye uketshezi esitsheni isikhathi eside.Hlanza isitsha ngamanzi kuze kungabikho uketshezi oluyinkungu noma izinsalela.
==>Hlanza yonke inkungu.Uma i-fogger yakho inepayipi elikhiphekayo, yisuse bese ugeza noma yiziphi iziphuzo ezinenkungu okungenzeka inazo ngaphakathi.Uma ipayipi lihlanzekile, linamathisele futhi ku-fogger.Hlanza iphampu ewuketshezi nezihlungi zayo.Lokhu ungakuthola esitsheni sokubulala izinambuzane, ukufinyelela kuzo ngokukhipha isitsha.Uma i-fogger igcinwe isikhathi eside, uzodinga ukuqinisekisa ukuthi iphampu ayivalekile.Futhi, hlanza ingaphandle lenkungu ngendwangu.Lokhu kuzokusiza ukuthi uhlole noma yiziphi izimpawu zokulimala emzimbeni we-fogger okungenzeka kwenzeke ngesikhathi usetshenziswa.Njengoba kushiwo ngenhla, hlala uthulula isitsha sokubulala izinambuzane bese usigeza ukuze ususe noma iyiphi insalela yesisombululo esinenkungu.
==>Qinisekisa ukuthi uvikela i-nozzle ye-fogger uma ugcina ithuluzi isikhathi eside.
Isitoreji se-ULV Fogger: -
Njengoba sishilo ngaphambili, inkungu idinga ukuhlanzwa kahle futhi yomiswe ngokugcwele ngaphambi kokuyigcina isikhathi eside.
Kufanele, vele, ususe noma yisiphi isisombululo senkungu esitsheni ngemuva kokusetshenziswa ngakunye.Kodwa, ukuze ugcine isikhathi eside, KUFANELE uhlale uthulula isiqukathi sanoma yisiphi isisombululo senkungu esisele.Noma yisiphi isisombululo esisele ethangini singalimaza isiqukathi kanye nendlela yokumpompa, okungenza inkungu ingakwazi ukusetshenziswa.
Bese ugeza kahle isitsha esingenalutho ukuze uqiniseke ukuthi silungele ukugcinwa futhi ukhumbule ukomisa isitsha ngokugcwele ngaphambi kokusigcina ukuvimbela noma yikuphi ukugqwala ethangini noma kwezinye izingxenye zenkungu.
Kufanele ugcine i-fogger yakho endaweni epholile, eyomile.Gwema ukugcina i-fogger ezindaweni ezifinyelela amazinga okushisa aphezulu kakhulu noma aphansi.Futhi uma ugcina inkungu isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisishiyagalombili, kufanele ugxume inkungu izikhathi ezimbalwa ukuze uqiniseke ukuthi iphampu nombhobho akuvalekile.Amanye ama-ULV foggers abandayo adinga ukuthi ugxumeke ngamafutha akhethekile ngemva kwezinyanga ezingu-7 kuya kweziyi-8 zokulondoloza kodwa lokhu kuvame ukuboniswa encwadini yeziqondiso ze-fogger.
Ukuhlanza i-ULV Fogger Yakho: -
==>Ngemuva kwenkungu, susa isitsha se-insecticide.Gcina i-valve ivuliwe ngokugcwele futhi uvumele i-fogger ukuthi isebenze umzuzu owodwa.Lokhu kuzokhipha noma yisiphi isisombululo esisele kumashubhu.
==>Sula noma yiluphi uketshezi olusele emshinini.Ukuze wenze lokhu, susa isitsha se-insecticide ku-fogger, usithulule bese usigeza ngamanzi ahlanzekile.Bese, gcwalisa kabusha isitsha sesixazululo ngamanzi noma uphalafini, ngokusekelwe ohlotsheni lwenkungu kanye namakhemikhali enkungu owasebenzisayo.Uma usebenzisa izixazululo zenkungu esekelwe emanzini, gcwalisa isitsha ngamanzi.Nakuba uma usebenzisa izixazululo ezisekelwe kumafutha, gcwalisa isitsha ngophalafini.Buyisela isitsha ku-fogger bese uyivumela ukuthi isebenze imizuzu embalwa.Amanzi noma uphalafini uzosusa noma yimaphi amakhemikhali asele ngaphandle kwamashubhu e-fogger.Ungakwazi futhi ukucwilisa umlomo we-fogger kusinyibilikisi esifanele ukuze uhlanze noma yimaphi amadiphozithi amakhemikhali.
==>Ngemva kwalokho, gcwalisa isitsha ngamanzi anensipho bese usifafaza izikhathi ezimbalwa.Lokhu kuzosusa noma yikuphi uketshezi olusele kumashubhu.Bese ugeza isitsha ngamanzi ahlanzekile, ufafaze amanzi ahlanzekile izikhathi ezimbalwa ukuze ugeze amashubhu, uthulule esitsheni, futhi womise yonke into kahle ngaphambi kokugcina inkungu.
==>Okokugcina, susa isihlungi somoya.Igeze ngamanzi noma njengoba kubhaliwe encwadini yeziqondiso ze-fogger.Bese uvumela isihlungi some ngokuphelele ngaphambi kokusibuyisela emshinini.
Ukugcinwa kwe-ULV Fogger: -
==>Hlola noma yiziphi izimpawu zokuguga noma ukulimala kwe-fogger ngaphambi nangemva kokusetshenziswa ngakunye.Kubalulekile ukubheka imifantu ezingxenyeni ezintekenteke njengesiqukathi se-fogger yesibulala-zinambuzane kanye nepayipi.
==>Uma uthola noma yiziphi izingxenye eziphukile noma ezilimele, zishintshe ngokushesha.Futhi sebenzisa izingxenye ezishintshayo ezifanele kuphela ezinconywe umenzi.
==>Okokugcina, khumbula ukugcoba zonke izingxenye ezihambayo njalo.Lokhu kuzokwandisa isikhathi sempilo ye-fogger futhi kusize ukugwema ukugqwala.
Zikhathi zonkeLONGRAYizodala imishini emisha yokufafaza ubuchwepheshe yokuvikela impilo yomphakathi nendawo ehlanzekile ukubulala lonke uhlobo lwegciwane emhlabeni Unomphela futhi sizozama ukugcina umhlaba wethu uphephile, uluhlaza futhi uhlanzekile.
I-Longray iphishekela kuphela umshini wokunikezela ngekhwalithi engcono kakhulu ngentengo ethengekayo kuwo wonke amaklayenti